WAAYIHII WARSAME Q32AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q32AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q32AAD
Idil waxa ay ka shaqaynaysay markaas bangi ku yaalla bartamaha Nairobi. Siddeeda aroornino ayay shaqada gashaa afarta galabtiina waa ay ka soo baxdaa. Maalintaas Idil shaqo ma aysan aadin oo fasax toddobaad ah ayay ka soo qaadatay shaqada.
Guriga reer Xaaji Doolaal subixii waa laga kala tagaa, qof shaqo aada iyo mid waxbarasho aada ayaa qoysku u qaybsamaa, gabadha jaariyadda ah oo kaliya ayaa guriga ku harta. Idil guriga cidlada ah ayay ka faaidaysatay dharkeedi inta ay boorso ku guratay ayay bixitaan isku diyaarisay. Inta aysan bixin warqad ayay u qortay waalidkeed waxa ay tiri sidaan..
Ka: Idil Xaaji Doolaal
Ku: Aabbe iyo hooyo
Gacale aabbe iyo gacalo hooyo, labo asbuuc ka hor waxaan idiin keenay Warsame Faarax oo aad taqaannaan ammaanadiisa iyo wanaaggiisa, waxa aan idiin sheegay in aniga Warsame aan isjecel nahay kuna heshiinnay in aan isguursanno oo reer yagleelno. Warsame waxa uu soo maray sidii dhaqanka soomaaliyeed iyo diinta Islaamku qabeen waxa uu na idinkugu yimid gurigiinna asaga oo doonaya gabadhiinna Idil. Nasiibdarro aabbahay Xaaji Doolaal, Warsame u ma uusan sharfin sidii loo sharfay. Sidaas daraaddeed aniga iyo Warsame waxaan baarnay waxa diinta Islaamku ka qabto go’aanka aabbahay culimada diinta taqaaanna waan u bandhignay waxaa caddaatay in aabbahay uusan xaq u lahayn in uu gabadhiisa u diido Warsame. Sidaas awgeed aniga Warsame waan isguursannay waxa aanan degnay xaafad ka mid ah xaafadaha Nairobi.
Aabbe iyo hooyo waxaan idinka codsanayaa in ay aad iigu ducaysaan ninkayga Warsame.
Hooyo iyo aabbe waan idin jeclahay.
Idil inta ay warqaddii miiska fadhiga dul saartay ayay iridda ka baxday Warsame oo bannaanka ku sugayay gaarigii uu watay na dalaq tiri.
Warsame waxa uu Idil geeyay suuqa bartamaha Nairobi si ay uga soo adeegato. Intii ay suuqa ku jirtay Idil, Warsame gurigii inta uu tagay ayuu diyaariyay cunto iyo cabitaanno uu maqaayad ka soo gaday waxa uu na wacay wadaadkii Idil ku mehrin lahaa oo uu horay u la ballamay. Intii Warsame hawashii guriga ku mashquulsanaa Idil taksi ayay soo qaadatay waxa ay na toos u soo abbaartay gurigeedi cusbaa. Idil markii ay guriga u soo dhawdahay ayay Warsame soo wacday waxa uu na u sheegay in wadaadkii iyo labo nin shuhuud ahi ay yimaadeen oo ay guriga joogaan.
Idil oo guriga dhinaca dambe ka soo gashay iyo Warsame oo wada socda ayaa qolkii fadhiga oo wadaadkii iyo shuhuuddii fadhiyaan soo galay waana la isku mehriyay.
Maamo Caasho galabtii markii ay guriga timid oo ay dharkii shaqada iska beddashay qolkii fadhigana soo fariisatay gabadhii jaariyadda ahayd na koob shaah u keentay ayay isha ku dhufatay warqadda miiska saaran. Inta ay soo qabatay ayay akhrisay markii ay dhammaysay maamo Caasho oohin ayay jabsatay “Alla ba’ayeey tanina ma ii laabnay, dhibkaas oo dhan odaygaas xun ayaa falkiyay haddii uu gabadha si sharaf leh ku bixin lahaa ceebtaan caawa ma dhexfadhiyeen.” Markii ay cabbaar calaacashay ayaa Xaaji Doolaal albaabka soo garaacay, gabadhii jaariyadda ahayd ayaa ka furtay uu gudaha soo galayba waxa uu la kulmay xaaskiisi oo ilmadu ka dareerayso. Inta uu naxay buu ku waydiiyay waxa dhacay. “balo iyo baas aadan adigu falkin ma dhicin” inta ay tiri ayay warqaddii u dhiibtay. Xaaji Doolaal markii warqaddii dhammeeyay ayuu inta jeexjeexay yiri “laga bilaabo saacaddaas Idil i ma sheegato waana aan dayriyay habaar qabtada.” Habeenkii oo dhan maamo Caasho waxa ay isku dayaysay in ay Xaaji Doolaal ku qanciso in uu reerka ceebtiisa asturi gabadha iyo wiilkana isku daro oo xattaa meher iyo aroos cusub u sameeyaan laakiin Xaaji Doolaal dhaar buu ku maray in uusan Idil dib dambe u sheegan doonin haddii laamiga baabuur ku kala gooyana uusan maydkeeda dul tagi doonin. Maamo Caasho waxa ay wacday taleefankii Idil mise waan uu dansan yahay haddana kii Warsame ayay wacday mise asna waa dansan yahay.
Labo maalmood kadib Idil waxa ay wacday hooyadeed waxa ayna u sheegtay in ay nabadqabto ayna tahay xaaska Warsame xaafad magaalad ka mid ahna deggan yihiin. Maamo Caasho waxa ay Idil ka codsatay in Idil guriga timaaddo oo ay aabbeheed isla maslaxdo laakiin Idil waxa ay ku adkaysatay in marka aabbbe ogolaadi guurkeeda ay ayaga iyo ninkeedu guriga imaan doonaan.
Warsame asaguna waxa uu wacay odayaashii reerkiisa ahaa u na sheegay waxa dhacay waxa uu na ka codsaday in ay Xaaji Doolaal la hadlaan. Odayaashii waxa ay waceen Xaaji Doolaal u na sheegeen in ay wixii dhacay ee wiilkoodu sameeyay xaalmarin ay bixinayaan Xaaji Doolaal na wiilka iyo gabadha isugu duceeyo balse Xaaji Doolaal waaba uu inkiray in uu dhalay gabar Idil la yiraahdo. S
Si kasta oo hooyo Caasho isugu dayday in ay Idil guriga ku soo celiso waa ay ku guuldarraysatay waayo Idil waxa ay cabsi ka qabtay aabbeheed waxa ay doonaysay in marka hore Xaaji Doolaal go’aankiisi ka laabto oggolaadana guurkeeda.